Ihe ntụgharị ntanetị. Olee otu iji tọghata site na otu usoro gaa na nke ọzọ na-enweghị wụnye mmemme ọ bụla | Akụkọ akụrụngwa
LIhe ntụgharị ntanetị bụ mmemme anyị nwere ike iji tọghata faịlụ site na otu usoro ọzọ ma na-enweghị ịwụnye ihe ọ bụla na kọmputa anyị ebe ọ bụ na a na-etinye mmemme ndị a na sava ndị na-enye ọrụ ntụgharị.
Tna ị ga-ajụ ma ọ bụrụ na ị nwere ike inwe mmasị na-ebugote faịlụ na ihe nkesa site na ,ntanetị, wee gbanwee ya, na oge niile ọrụ nke ụdị a na-achọkarị, mgbe ọ nwere ike ịdị mfe ịwụnye onye ntụgharị na kọmputa gị na ugbu a bụ. Maka m azịza ya dị mfe, ọ bụrụ na ịnweghị onye ntụgharị aka, ọ bụrụ na ị nọ na kọmpụta nwere nnweta amachibidoro na-agaghị ekwe ka ị wụnye mmemme ọ bụla ma ọ bụ naanị ma ọ bụrụ na ị maghị mmemme ọ bụla na-eme ntụgharị ị chọrọ , ị nwere ike mgbe niile jiri onye ntụgharị ntanetị ime ihe omume ulo oru gi.
EEnwere ọtụtụ ndị ntụgharị ntanetị, yabụ na anyị nwere ike ịchọta nke na-enye anyị ohere ịgbanwe faịlụ anyị chọrọ ịgbanwe usoro. Naanị ọghọm dị na ndị ntụgharị a bụ oge na ọ nwere ike iwepụta oge iji bulite faịlụ ahụ na ntụgharị ya na-esote. Ọzọ drawback bụ oke oke nke faịlụ iji bulite. Anyị nwere ike ịchọta ndị ntụgharị na-ekwe ka ibugo 1 mega, ebe ndị ọzọ na-akwado ihe ruru 150 megabytes. Eziokwu bụ na maka faịlụ buru ibu karịa nke a, ma ọ bụrụhaala na njikọ Internetntanetị anaghị eme ka bandwidth gị dịkwuo ukwuu, ọ baghị uru iji onye ntụgharị ntanetị n'ihi oge ọ na-ewe iji bulite.
ENdị a bụ ndị ntụgharị ntanetị nke rụụrụ m ọrụ kacha mma:
Media-tọghata: tọghata akwụkwọ (.doc, .pdf, .txt, wdg), faịlụ (.tar, .zip, .rar, wdg), vidiyo (.avi, .wmv, .flv, wdg), ihe oyiyi (. bmp, .ico, .jpg, wdg) na faịlụ ọdịyo (.mp3, .wav, .m4a, wdg). Ihe omume a bụ n'efu, ọ dị n'asụsụ Spanish (nke a sụgharịrị nke ọma ma ọ na-agbaso), ọ na-enye gị ohere ịgbanwe faịlụ ruru megabytes 150 na ịkwesighi ịnye email iji budata.
ZAMZAR beta- Tọghata akwụkwọ, vidiyo, onyonyo, na faịlụ. Na nke a, ọ gaghị ekwe omume ịtụgharị faịlụ abịakọrọ, dịka ọmụmaatụ, na interface ahụ dịkwa n'asụsụ Bekee, ọ bụ ezie na ọ kensinammuo. Nwere ike bulite faịlụ nke ihe ruru 100 megabytes ka ị mechara tọghata ha ma chọọ inye email ka ha zitere gị njikọ ntanetị.
HM na-anwale ma converters na ha na-arụ ọrụ n'ụzọ ziri ezi na a ìgwè nke formats. M ga-ebipụta Nkuzi "nzọụkwụ site nzọụkwụ" iji ndị ntụgharị ntanetị a, ebe ọ bụ ezie na ha dị mfe iji, mgbe ụfọdụ dabere na usoro a ga-atụgharị, ha na-eweta ọtụtụ nhọrọ ị ga-ama otu esi ahazi. Hụ gị n'oge na-adịghị anya, ekele gị
PD: I nwere ike inwe mmasị ịmata olee otu iji tọghata 3gp. Soro usoro na njikọ ma ị ga - ahụ otu ọ dị mfe iji tọghata vidiyo na 3GP.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » Ihe ntụgharị ntanetị. Olee otu iji tọghata site na otu usoro ọzọ na-enweghị wụnye ọ bụla omume
Ndewo, Saịtị gị amaka. Banyere, Valintino Guxxi
Ndewo Valintino, Obi dị m ụtọ na saịtị ahụ masịrị gị. Daalụ.
Ihe ntụgharị ndị enwere maka program.zip. na programmụ.exe. online na ihe kwesiri ime ihe site na ntinye iji mee ka o kwe omume
Zaghachi Emilio Rosillo
Ndewo, naanị m chọrọ ịma ma enwere onye ntụgharị site na mmemme (.exe) na faịlụ okwu (.doc) n'ihi na o doro anya na nje gbanwere faịlụ m na faịlụ m na mmemme na mgbatị ".exe", yabụ enweghị m ike imeghe ha , kedu ka m ga-esi nwetaghachi ozi m nwere na mmemme ugbu a? A na-ahụzikwa akụkụ ihe odide ndị m nwere !!
ọ bụrụ na mmadụ nwere ike inyere m aka biko !! n'eziokwu, mgbe m kpochapụrụ nje ahụ na panda 2008 nke a na-akwalite maka ọnwa efu na ịntanetị, mgbe m kpochapụrụ ya na antivirus a, akwụkwọ okwu m niile gbanwere na mmemme. M na-ekwu ".exe"
Tupu anyị emeela nke ukwuu !!
Ndewo Jeser, anụtụbeghị ụdị ụdị nje a. Hụ ma achọpụtara m ihe ọ bụla. Echiche kacha mma.
Ndewo, m ga-achọ ịma etu m ga-esi nwetaghachi ụdị faịlụ ndị a maka na m nwere ozi dị mkpa na steeti ahụ ma ọ bụrụ na ị nwere ike inyere m aka, m ga-enwe ekele maka ha nke ukwuu.
Zaghachi Omar Andres
Ndewo, m ga-achọ ịma ma enwere onye ntụgharị maka faịlụ cdr (corel) iji belata nha faịlụ ahụ, wee nwee ike iziga ha site na mail, daalụ
Zaghachi ka ferchu
Ana m ekele gị nke ukwuu maka ozi gị na enyemaka, mana… iji tọghata vidiyo nke ihe karịrị 150 mb, enwere ihe?
ọrụ perez dijo
com Ana m eme iji tọghata data na usoro ọnụọgụ abụọ nke a ga-eji na Microsoft Excel .... ekele
Zaghachi ọrụ perez
Ndewo, olee otu m ga-esi gbanwee pdf ma ọ bụ doc na cdr: S daalụ
hello ọma, m chọrọ ka ị na-enye m mmemme saịtị iji tọghata videos si flv ka avi format, ebe ọ bụ na m na-eji ha ruo ugbu a ha na-enyekarị nsogbu na-ada a otutu .... ekele na-ekele gị nke ukwuu maka ihe niile
Kedụ ka m ga - esi tọghata faịlụ n’ime mmemme? Ọ nwere ike? biko onye za m.
Daalụ maka ọrụ ị na-enye: Ajụjụ m: Enwere m winzyp faịlụ na mgbe m mepere ya, enwere egwu mp3 ma enweghị m ike ire ya CD. Kedu ụdị onye ntụgharị m chọrọ? ebe ọ bụ na ịdọrọ "egwu" adịghị anọgide na ndepụta ndekọ. Ekele na ekele
Ezigbo ozi. Daalụ maka iche echiche mgbe niile gbasara mkpa ndị ọzọ ... 🙂
Achọrọ m ngwa ngwa ịgbanwe CDR FILES TXT TO XLS OR DWG. Budata ụfọdụ data nke mkpokọta ngagharị na ọ pụtara m na usoro a nke m na-amaghị.
Nwanne m i meela.
Zaghachi JOSUE ECHENAGUCIA